မမပြီးတော့မယ် မောင်လေး | CeleTrend
ပြသနာက ကျနော်ပဲဗျတပ်ထဲက ထွက်လာကတည်းက လူက ရှူနာရှိုက်ကုန်းဖြစ်နေပီ။ ပြောရရင် မိန်းမကို ကောင်းကောင်းမလိုးနိုင်ဘူးလေ။ အားရအောင် မလိုးနိုင်ဘူး။ တပ်ထွက်စစ်စစ်ပါ။ ဒါနှင့် ဘာလို့မိန်းမယူလဲမေးရင် ဆေးပေးမီးယူ လိုအပ်တယ်မလား။ ကျနော်ကျန်းမာရေးက ညံ့လာပြီလေ။ ကျနော့်မိန်းမသုံးဆယ့်ငါးဆိုတော့ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိသေးတယ်။ လုံးကြီးပေါက်လှပေါ့။ တဏှာစိတ်ကပြင်းတယ်။ ကျနော်ကြိုးစားပြီး လိုးသေး တယ်။ သူအာသာမပြေဘူး။
ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တယ်။ ငါသေရင် ငါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ မိန်းမဆီပဲရောက်မှာ သူ့လည်း ဆွေမျိုးသားချင်းနည်းတယ်။ အသက်ကြီးရင် သူ့ကိုပြုစုမယ့်သူကလည်းမရှိဘူး။ အင်း.. ငါ့အကိုကြီးသားကိုခေါ်ပြီး အမွေစား အမွေခံခေါ်မှပါ။ ဒါနဲ့ကျနော့အကိုကြီးရဲ့သား မင်းသူ ကိုခေါ်လိုက်တယ်။ မင်းသူက အသက်နှစ်ဆယ် လူကောင်ကထွားတယ်။ ရွာသားဆိုတော့ ဗလလည်းရှိတယ်။ လုပ်ရည် ကိုင်ရည်လည်းရှိတယ်။ “ငါ့တူ..မင်းသူ” “ဗျာ ဦလေး ” “ဒါမင်းဒေါ်လေး သူ့နာမည် ဒေါ်စမ်းမော်တဲ့မင်း.. သူနှင့် ဈေးရောင်း လိုအပ်တာကူညီ” “ဟုတ်ကဲ့ဦးလေး’” မင်းသူလည်း အဒေါ်ကို အခုမှမြင်ဖူးတယ်။
မြို့သူအဒေါ်ဆိုတာကလည်း အသက်က ငယ်သေးတော့ ရုပ်ကလည်း သန့်သေးတယ်။ ဈေးရောင်းတာဆိုတော့ သပ်သပ်ယပ်ယပ်လေး ဝတ်စားရတော့ အဒေါ်ကလှနေတယ်လေ။ အဒေါ်က ဖင်ကြီးရင်ကြီးပဲပြောရရင် အရမ်းကိတ်တယ်။ “အင်း လေ ဦးလေးကနေမကောင်းဘူးဆိုတော့ အဒေါ်ကို မကြိတ်နိုင်ဘူးထင်ရဲ့ အဒေါ့်အိုးကြီးက ကားနေတာပဲ” မင်းသူတွေးနေတုန်း “မင်းသူ” “ဗျာ ဒေါ်လေး” “ကဲငါတို့ဈေးသွားရအောင်” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” ဒေါ်လေးနှင့်မင်းသူဈေးလိုက်သွားတယ်။ ဒေါ်လေးဆီက ရေမွှေးနံ့လေးတသက်းသင်းရတယ် လူပျိုလေး မင်းသူစိတ်ထဲ တမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်လေ။
ဆိုင်ခန်းကိုရောက်တော့ ဒေါ်လေးက “မင်းသူ ရော့သော့ ဆိုင်ဖွင့်” “”ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” မင်းသူဆိုင်ဖွင့်တော့ ဆိုင်ခန်းထဲပစ္စည်းတွေ ကျပ်သိပ်ပြီးထည့်ထားတယ်။ မနက်အစောကြီး ဆိုင်ဖွင့်ရတာမို့ မီးရောင်မှိန်ပြပြထဲ လမ်းကျဉ်းကလေးမှာ နှစ်ယောက်သား ပစ္စည်းတွေယူပြီးဆိုင်ရှေ့ခင်းရတော့တယ်။ အဒေါ်က ဟိုနေရာဘာပစ္စည်းချ။ ဒီနေရာဘာပစ္စည်းချနဲ့ ခိုင်းပြီး သူကိုယ်တိုင်းလည်းလုပ် မင်းသူလည်းခိုင်းပေါ့။ အဲမှာ ပြသနာတက်တာကမင်းသူ။ ဆိုင်ခန်းထဲလမ်းက ကျဉ်းတော့ အဒေါ်နောက်က ကပ်ပြီးပစ္စည်းတွေဝင်ယူရတယ်။ အဒေါ်တင်ပြီး ထိပြီးသွားရလေ မင်းသူလီးကတောင်လေ။
“အာ ဒုက္ခပဲ အဒေါ်သိသွားရင်တော့ပြသနာပဲ” ဒေါ်စမ်းမော်သိတယ်။ ဒီလိုကျဉ်းကျဉ်းကျပ်ကျပ်ထဲ လူချင်းကကပ်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတာ။ သွေးမတော် သားမစပ်။ လင်နဲ့တော်မှ ရတဲ့တူ။ နောက်ပြီး ငယ်ငယ်ကထိန်းကျောင်းလာတာ မဟုတ်တော့ မင်းသူစိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေမှန်းသိတယ်။ မင်းသူလို လူပျိုအရွယ်မပြောနဲ့ သူတောင်တမျိုးကြီး ဖိုးသိုးဖတ်သပ်ခံစားရတာ။ ဟန်မပျက်ရအောင်သာ မင်းသူကိုခိုင်းရင်း “ငါ့တူရေ နင့်မလည်း အိုးတိုးအမ်းတန်းနဲ့ ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ” “ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး လမ်းကကျဉ်းတော့ ဒေါ်လေးကိုထိနေလို့” “အမလေးဟယ် ထိရောဘာဖြစ်မှာလဲ ငါက နင့်အဒေါ်လေထိထိ အားမနာနဲ့”
“ဟုတ်ဒေါ်လေး” “အယ် ငါမင်းသူကို အားပေးအားမြှောက် ပြုနေပီလားမသိဘူး.. တော်ကြာ ကောင်လေးအတင့်ရဲလာမှ’” တွေးမိပြီး ဒေါ်စမ်းမော်ရင်ထဲ တမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရသလို ရှက်သလိုလိုလေးဖြစ်သွားပြီး အဖုတ်ထဲလည်း တမျိုးကြီးခံစားလိုက်ရတယ်။ မင်းသူလည်း အဒေါ်က အားနာစရာမလိုဘူး ပြောမှတော့ ခုနကလီးနှင့်တင်သားမထိအောင် ဂရုစိုက်နေရာကနေ အခုတော့ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ အဒေါ်တင်သားကြီးတွေကို မရှောင်တော့ပဲ ပွတ်သတ်သွားတော့တယ်။ အိစက်စက်တင်သားကြီးတွေကမင်းသူအတွက် ရင်ခုန်စရာကြီးမို့ လီးကတောင်နေတယ်။
ဒေါ်စမ်းမော်လည်း မင်းသူ လီးနှင့် မိမိတင်သားကြီးကို တစ်ခါထိတိုင်း စိတ်ကထလာတယ်။ ယောက်ျားမလိုးနိုင်တာ ကြာခဲ့ပီလေ။ တောင့်တနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာ ဒီလိုကြီးထိတွေ့နေရတော့ စိတ်တွေဂယောက်ဂယက်။ ဒီလိုနဲ့မင်းသူ နေ့လည်ဈေးရောင်း ညနေဈေး ဆိုင်ပြန်သိမ်း။ မနက်ကဝေဒနာညနေပြန်ဖြစ်။ ဆိုင်သိမ်းတော့လည်း ဒီလမ်းကျဉ်လေးမှာပဲ မနက်ကလိုပဲ သိမ်းရတာကိုး။ မင်းသူတော့ စိတ်တွေကမတည်မငြိမ် အဒေါ်ကို ပစ်မှားမိနေတယ်။ စကားတောင် မပြောရဲဘူး။ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း မင်းသူစိတ်တွေ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတော့ မင်းသူကို စကားမရှိစကားရှာပြီး ပြောနေမိတယ်။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြန်တော့လည်း ဒေါ်စမ်းမော်ထမင်းချက်ရတယ်။ မင်းသူလည်း ထမင်းချက်တာ ကူပေးတယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်က အိမ်ရောက်ပြီမို့ အိမ်နေအဝတ်အစားဖြစ်တဲ့ လည်ဟိုက်ဂါဝန်ကြီးပဲ ဝတ်ထားတာ။ မင်းသူလည်း ဒေါ်စမ်းမော်ရင်ဘတ်ကြီး ချောင်းကြည့်လိုက် တင်ဆုံကြည့်တွေလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ တံတွေးတွေပဲမြိုချနေမိတယ်။ “ကဲငါ့တူရေ ချက်လို့ပြုတ်တော့လို့ပြီးပြီ၊ ငါရေအရင်ချိုးမယ် ပြီးတော့နင်ချိုးပေါ့” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” ဒေါ်လေးပြောပြီးအခန်းထဲဝင်သွားတယ်။ ပြီးမှ ထမီရင်ရှားပြီးထွက်လာတယ်။ ရင်သားဖွေးဖွေးနဲ့ ရေလဲထမီပါးပါးထဲမှ ကြွရွနေတဲ့ ဖင်ကြီးတွေကြည့်ရင်း လီးကတောင်လာပြန်ပြီ။ ရေချိုးသံတဘွမ်းဘွမ်းကြားရတယ်။ တော်တော်ကြာရေချိုးပြီး ဒေါ်လေးရေချိုးခန်းထဲက ထွက်လာပြီး “မင်းလည်း ရေချိုးတော့မင်းသူ”
“မင်းသူရေ ရေချိုးပြီး မင်းဦလေးခေါ်အုံး ထမင်းစားမယ်လို့” “ဟုတ်ဒေါ်လေး…ဦလေးရေ ထမင်းစားရအောင်” “အေး အေးလာပြီကွ” ဦလေးတို့နှင့်ထမင်းအတူစားကာ ထိုတည ကုန်ဆုံးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ မင်းသူ တနေ့ထက်တနေ့ ဒေါ်စမ်းမော်နဲ့ ပိုရင်းနီးလာတယ်။ ဈေးဆိုင်ဖွင့်ချိန်သိမ်းချိန်ဆို ဒေါ်စမ်းမော်တင်ကြီးကို သူ့လီးနှင့်မထိ ထိအောင်လုပ်တတ်လာတယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း ဒီအထိအတွေ့မှာ သာယာလာလို့ ဘာမှမပြောဘူး။ အိမ်မှာ လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိလို့သာ ပေါ်တင်မလုပ်ရဲတာ။ အခုလည်း မင်းသူနောက်က လီးနှင့်ထောက်ရင် အဖုတ်မှာအရည်တစီစီနဲ့ တစ်ခါတလေ လည်း စိတ်ထဲကလုပ်ပစ်ချင်စိတ်က ဖြစ်နေတယ်။
တနေ့ ညနေဆိုင်သိမ်းရင်း မင်းသူက ပစ္စည်းတစ်ခုအထဲသွားထည့်ရာမှာ သူ့ကိုနောက်က ပွတ်ပြီးသွားတော့ သူကပစ္စည်းအပေါ် လှမ်းတင်ချိန် မင်းသူအပေါ်တင်ကြီးနှင့် ဖိသလိုဖြစ်သွားတော့ “အာ့ ” “အယ်မင်းသူ ဘာဖြစ်သွားလဲ ” “ဟီး နာသွားတယ်” “ပြစမ်းဘယ်အနားနာသွားလဲ” “ပြလို့မဖြစ်တဲ့နေရာ” “ဟားး ဘာဖြစ်သွားလဲ” “မသိဘူး ဒေါ်လေး” “ကဲဆိုင်ခန်းတံခါးပိတ်လိုက်ငါကြည့်ပေးမယ်” “ဟုတ်ကဲ့” မင်းသူဆိုင်ခန်းတံခါးထပိတ်လိုက်တယ်။ပြီးမှ “ဒေါ်လေး ဒီမှာကြည့်ပေးစမ်းပါအုံး” “နင်ပဲ ပြလို့မရတဲ့နေရာဆို” “အင်းဒေါ်လေးကြည့်ပေးမယ်ဆိုလို့” “အင်းပါ ကဲပြ” မင်းသူ ပုဆိုးချွတ်ချလိုက်တယ်။
“အမလေးမင်းသူနင့်ဟာကြီးကလဲ” “ဒေါ်လေးသေချာကြည့်ပေးစမ်းပါ နာနေတယ်” “အေးပါဟ” ဒေါ်စမ်းမော်ဒူးထောက်ထိုင်ကာ မင်းသူလီးကိုင်ကြည့်လိုက်တော့ လီးတအားတောင်လာတယ်။ လီးက အိမ်ယောက်ကျားထက် အများကြီးကြီးတယ်။ အကြောတွေထောင်ထလို့ ဒစ်ကြီးက မှိုပွင့်သဏ္ဋာန်ဖြစ်နေတာ။ ဒေါ်စမ်းမော် သေချာကိုင်ကြည့်နေတုန်း လီးထိပ်က အရည်ကြည်တွေစိမ့်ထွက်လာတယ်။ ကြည့်ရင်းနှင့် ဒေါ်စမ်းမော်စဖုတ်က စိမ့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ယားနေတော့တယ်။ မင်းသူလည်း စိတ်ကထိန်းမရတော့ ဒေါ်စမ်းမော်ခေါင်းကိုင်ကာ ဒေါ်စမ်းမော် ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ရာ “အု ဝု အု ..အာ့အာ့… ထွီ မင်းသူ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ” “ဒေါ်လေးကျနော်မနေနိုင်တော့လို့ပါ”
“ဟေ့ နင့်ဦးလေးသိရင် ငါတို့ပြသနာတက်မယ်” “မသိအောင်နေမယ်ဗျာ.. ကျနော်အရမ်းလုပ်ချင်နေပြီ” မင်းသူလည်း အခြေအနေကောင်းမှန်းသိတော့ အရဲစွန့်တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း စိတ်ကအရမ်းပါနေပြီ။ “ကဲ အဲလောက်ဖြစ်နေရင်လည်း လုပ် တော့ ငါကုန်းပေးမယ်” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး” ဒေါ်စမ်းမော်မင်းသူလီးကြီးနှင့် အလိုးခံချင်နေတာကြာပြီ။ အခုလိုအနေအထားမှာ လက်လွတ်မခံတော့ဘူး။ အိပ်ပြီးခံလို့ရတဲ့ နေရာမဟုတ်တော့ ကုန်းပေးလိုက်တယ်။ မင်းသူလည်း ဒေါ်စမ်းမော်နောက်ကဝင်ပြီး အဖုတ်ကို တချက်စမ်းလိုက်တယ်။ အလိုးမခံရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အဖုတ်က အရည်တွေစိုရွဲနေတာမို့ကုန်းပြီး တချက်ယက်လိုက်တယ်။ “ပလပ် ပလပ်” “အိုး …အာ့ အာ့ မင်းသူရယ်ကောင်းလိုက်တာ” “ဒေါ်လေး အဖုတ်ယက်မခံဖူးဘူးမလား”
“အင်း..မခံဖူးဘူး နင့်ဦလေးကယက်မပေးဖူးဘူး” ‘”နောက်ဆိုရင် ကျနော်ကောင်းကောင်းယက်ပေးပါ့မယ် ဒေါ်လေး” “အေး ဟယ် ငါလည်းခံကြည့်ချင်တယ်။ အခုကအချိန်မရဘူးနင်တစ်ခါတည်းသာ လိုးတော့ ငါအရမ်းခံချင်ပြီ” “ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေး’” မင်းသူပြောရင်း လီးကိုအဖုတ်ကိုတေ့ပြီး ထည့်လိုက်တယ်။ “ဗျစ် ..ဗျိ ဗြိ ဗြိ” လီးက အဖုတ်ထဲပြည့်ကျပ်ပြီးဝင်သွားတယ်။ “အာ့ လား လား မင်းသူရယ်တလုံးတခဲကြီးပဲ နင့်နေတာပဲဟယ်” “ကောင်းရဲ့လား ဒေါ်လေး” “အေး အရမ်းကောင်းနေပြီ လိုးစမ်းပါဟာ” မင်းသူ တဖြေးဖြေးလိုးရာကနေ ကြမ်းလိုက်တယ်။ “ဗျိ..ဇွိ ဗျိ ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ်ဖန်းဖန်း’”
“အာ့ရှီးရှီး အီးးအားး အာ့အိုးအိုး” “ဘွတ်ဖွတ် ဘွတ်ဖန်းဖန်းဖန်း” မင်းသူလီးကအလုံးအထည်ကလည်းကြီး ရှည်လည်း ရှည်တော့ ဒေါ်စမ်းမော် အသံမထွက်မိရအောင် ကြိတ်ညည်းမိတယ်။ အားကောင်းမောင်းသန် လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆောင့်ချက်က အရသာကောင်းကောင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိနေတော့။ လင်ဖြစ်သူ ကိုအောင်မောင်းမပေးနိုင်တဲ့ ကာမအရသာကို အခုမှ နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ခံစားရပြီ။ “အားးမင်းသူရေ ကောင်းလိုက်တာကွယ်အိုး အားအားး” အလိုးမခံရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အဖုတ်က အရမ်းပဲဇိမ်ရှိနေတယ်။ တချက်တချက် မင်းသူလိုးချက်က အရမ်းထိတယ်။ လီးဝင်ပြီး ပြန်ထွက်သွားမှာကိုတောင် စိုးရိမ်မိနေတယ်။ မင်းသူလည်း လိုးရတာ အရမ်းကောင်းနေတဲ့အတွက် တဖန်းဖန်းမြည်အောင် လိုးလိုက်တယ်။
ဒေါ်စမ်းမော်လည်း အရမ်းကောင်းလာပြီး မင်းသူ့လီးကြီးကို ကြိုက်သွားရတော့တယ်။ မင်းသူလိုးချိန် မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာတော့ “ဗျိ..ဇွိ ဗျိ ဘွတ် ဖတ် ဖတ် ဖွတ်ဖန်းဖန်း’” “အာ့မင်းသူ အိုး ဘယ်လိုကြီးလဲ အားးငါတမျိုးကြီး အား ထွက်ပီထွက်ပီ အားး အားး” ဒေါ်စမ်းမော် တစ်ယောက်မင်းသူနှင့်တွေ့မှ ပြီးဆုံးတဲ့အရသာကို ခံစားရလိုက်ပြီး မင်းသူလည်း ပြီးတော့မှာမို့ အားကုန်ဆောင့်လိုက်ပြီး အဖုတ်ထဲသုတ်တွေ ပန်းထည့်လိုက်တော့တယ်။ အိမ်ကိုဟန်မပျက်ပြန်ခဲ့ကြပြီး ပုံမှန်ချက်ပြုတ်စားသောက်နေကြပေမယ့် ကျမစမ်းမော်စိတ်က ဆယ်ကျော်သက်ပမာ ပျော်ရွှင်နေမိတယ်။ ကျမပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး မင်းသူလေးကြည့်တော့လည်း မှိူရတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ပျော်နေတာ။ မျက်နှာပိုးသတ်ရအောင် မနည်းကြိတ်ပြောရတယ်။
ကာမဆိုတာ သောက်လေငတ်လေ ပဲမို့ခိုးစားရတာက မလွတ်မလပ်နဲ့ ဆိုင်ခန်းလေးမှာပဲ အားမရပါဘူး။ ယောက်ျားအလစ်ကိုပဲ ချောင်းနေရတယ်။ ယောက်ကျားက ကျန်းမာရေးညံ့တော့ မနက်ဆို လမ်းလျောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ပြီး အိမ်မှာနေရတယ်လေ။ ကိုအောင်မောင်းကို အိမ်ကလေအပြင်ကို သွားစေချင်တယ်။ တနေ့ထက်တနေ့က မင်းသူလေးနှင့် အေးအေးဆေးဆေး လိုးချင်တဲ့စိတ်က ပြင်းပြလာတယ်။ မင်းသူရဲ့အဖုတ်ယက်တာကို ခံချင်တယ်။ ဆိုင်ခန်းမှာက မလွတ်လပ်ဘူးလေ။
ဒီတော့လည်း မာယာသုံးရတော့တာပေါ့။ “ကိုကြီးအောင်မောင်း” “ဘာလဲ မိန်းမ” “ကိုကြီးလည်းအိမ်မှာပဲနေရတာ ကြာတော့ မငြီးမွေ့ဘူးလား” “ငြီးမွေ့တာပေါ့ မိန်းမရာ” “အင်းလေ မင်းသူရောက်လာတော့ ဆိုင်ကိစ္စလည်း ကိုကြီးပူစရာမလိုတော့ဘူး၊ လေကောင်းလေသန့်လေးရအောင် မင်းသူအဖေတို့ဆီ သွားပါလား။ အဲမှာစိတ်အေးလက်အေးနဲ့ ဆွေမျိုးတွေဆီလည်ပေါ့” “အေး ဟ ငါလည်းသွားချင်နေတာ” “အဲဒါဆိုလည်းသွားလေ ကိုကြီးအောင်မောင်း” “အေး ငါမနက်ဖြန်သွားမယ်၊ နောက်ဆို ငါ့ကျန်းမာရေးကြောင့် မသွားဖြစ်လောက်တော့ဘူး” “ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီးအောင်မောင်း” နောက်တရက် ကိုအောင်မောင်းရွာဘက်သွားတော့ ကျမတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်သာဖွင့်ရတာ။ စိတ်က မပါဘူး။ အိမ်ပြန်ချင်စိတ်က များနေပြီလေ။
ဒါနှင့်ပဲ ဆိုင်ကိုစောစောပိတ်ပြီး အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ အိမ်လည်းရောက်တော့ “မမ ” “အယ် မင်းသူဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာလဲ” “မမလို့ ခေါ်တာလေ” “အယ်တမျိုးကြီးဟယ်” “ဟုတ်တယ်မမရဲ့ ဒေါ်လေးခေါ်ပြီးလိုးရတာ တမျိုးကြီးမို့လို့” “ဟေ့ မင်းသူ နင့်ဦးလေးရှေ့ကြဒေါ်လေးပဲခေါ်” “ဟုတ်ကဲ့မမ.. မမရယ်…ရင်အရမ်းခုန်တာပဲ” “အေး ငါလည်းရင်တွေခုန်နေတာပါ” မင်းသူ မမကိုဖက်ပြီးမမနှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းလိုက်တယ်။ ရင်ခုန်သံသာမက တဏှာစိတ်ကြောင့် အသက်ရှူသံပါ မြန်လာတယ်။ တကယ်တော့ ရမက်ပြင်းပြင်းနဲ့ နမ်းလိုက်တာပါပဲ။ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း ပြန်နမ်းပေးလိုက်တယ်။
မင်းသူလျှာကပါးစပ်ထဲဝင်လာပြီးမွှေတယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်လို ရင်တွေတငိမ့်သိမ့်ခုန်ပြီး စိတ်တွေ အရမ်းလှုပ်ရှားနေတာကြောင့် အဖုတ်ထဲက အရည်တွေစိုရွှဲလာနေပြီ။ မင်းသူလည်း အဝတ်တွေကိုချွတ်ပြီးဒေါ်စမ်းမော်အဝတ်တွေပါ ချွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်ရဲ့နို့ကို တလှည့်စီစို့ပေးလိုက်တယ်။ “ပြွတ် .ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့ မောင်လေး အာ့အင်းဟင်းးး” ကာမစိတ်တွေကပြင်းပြစွာဖြစ်ပေါ်ပြီးစမ်းမော် ညည်းတွားမိတယ်။ မင်းသူလီးကြီးကိုစမ်းပြီး ဆွပေးနေလိုက်တယ်။ မင်းသူလီးက ဒေါ်စမ်းမော်လက်ထဲ တဖြေးဖြေးကြီးထွားပြီး မာတောင်နေပြီ။ “မမ မောင်လေးမှုတ်ပေးမယ်” “အင်းမောင်လေး မမလည်းအယက်ခဲချင်လှပြီ” မင်းသူလည်း ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး အဖုတ်မို့မို့ဖောင်းဖောင်းကြီးကို နမ်းလိုက်တယ်။
“ရွှပ်” “”အာ့ ရှီးရှီး” အမွေးတွေ့ကြားဖြဲပြီးအစေ့ကလေးကို စုပ်လိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့..ရှီး..ရှီးးး မောင်လေးရယ် အားးးး” အစေ့ကိုအားရအောင်စုပ်ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားဖြဲကာ လျှာကို အပြားလိုက်လုပ်ကာ ယက်လိုက်ရာ “ပလပ် ပလပ် ပလပ်” “အားးးးအီးဟီးးးဟီး…မောင်လေး” ဒေါ်စမ်းမော်တကိုယ်လုံးတုန်သွားကာ ငှက်ဖျားထသကဲ့သို့ အော်ညည်းမိတော့တယ်၊ အရည်တွေ စိုရွဲနေတဲ့အဖုတ်ကိုလျှာစုချွန်ကာ ထိုးမွှေပြီးစုပ်ယူလိုက်ယက်လိုက် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပလပ် ပလပ်” “အားးအိုးးအင်းဟင်းးဟင်းးး” ဒေါ်စမ်းမော်မှာ အလိုးံရသလိုမဟုတ်ပဲထူးခြားတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် အရသာထူးကိုခံစားရပြီး ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာတယ်။ “အားတော်ပြီပြီးသွားလိမ့်မယ် မောင်လေး ” “ပြီးလေမမ ”
“မမကလိုးပြီးအတူတူပြီးချင်တာ” “အာ့ဆိုလည်း မောင်လေးလီးစုပ်ပေးအုံးလေ” “အေး ပါ မမလည်းစုပ်ချင်နေတာ” မင်းသူလီးကို မမမျက်နှာရှေ့ထိုးပေးလိုက်တယ်။ မျက်နှာရှေ့လီးတယမ်းယမ်းဖြစ်လာတော့ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း မင်းသူလီးကိုဖမ်းကိုင်ပြီး ဂွင်းသုံးလေးချက်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ လီးထိပ်က အရည်ကြည်တွေထွက်လာတော့မှ ဒေါ်စမ်းမော်ပါးစပ်ထဲ လီးကိုငုံပြီးစုပ်ယူလိုက်တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ်” “အားးးးရှီးးးရီးးကောင်းလိုက်တာမမရာ၊ လီးထိပ်လေးလျှာနှင့်ထိုးပေး” “အေးမောင်လေး” ဒေါ်စမ်းမေညိလည်းမင်းသူပြောသမျှနာခံကာ လီးအပေါ်ဝလျှာနှင့်ထိုးမွှေပေးလိုက်တယ်။
“ပလပ် ပလပ်” “အားးးအိုးးးဟူးးးရှီးရှီးအားးးးးးအားး ကောင်းလိုက်တာဗျာ” မင်းသူပြီးသွားမှာတောင်စိုးရိမ်သွားတယ်။ “မောင်လေးရပြီလား ” “ရပြီမမ” “လုပ်တော့မလား” “လုပ်တော့မယ်မမ” “အင်းလုပ် ” ဒေါ်စမ်းမော်အိပ်ရာပေါ်လှချပြီး အလိုးခံရန်စောင့်စဉ် “မမခါးအောက်ခံလိုက်မယ်” “အင်းခံလေ” ဒေါ်စမ်းမော်ခါးကိုကြွပေးလိုက်တယ်။ မင်းသူလည်း မမခါးအောက်ခေါင်းအုံးခံပြီး ပေါင်ကြားဒူးထောက်ဝင်ကာ အစေ့နေရာကို တချက်နှစ်ချက်ခန့်ချော်ထိုးလိုက်တယ်။ “အားလားးလားး မောင်လေး အိုး လိုးပါတော့” မင်းသူမမအဖုတ်ထဲလီးကို တဖြေးဖြေးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း မိမိအဖုတ်ထဲ လီးဝင်လာကိုကြည့်ရင်း စိတ်တအားကြွလာတယ်။ “ဗျစ် ဗြိ ဗျိ” “အားးမောင်လေး အခုမှအားရပါးရရှိလိုက်တာကွာ”
“”ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ်” “အားအိုးးအင်းဟင်းးဟင်း” ဒေါ်စမ်းမော် အားရပါးရညည်းညူပြီး အော်လိုက်တယ်။ မင်းသူလည်း စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်လိုးရပြီမို့ ဆောင့်သွင်းပြီးလိုးပေးလိုက်ရာ “”ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်း” “အားအိုးးအင်းဟင်းးဟင်း ကောင်းတယ် အားလိုးလိုးမြန်မြန်လေးလိုး” စောက်ဖုတ်ထဲမှာအမြှပ်တစီစီထနေပြီ။ “””ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်း” “အားအိုးးအင်းဟင်းးဟင်း ကောင်းတယ်” အားကောင်းမောင်းသန်မင်းသူလိုးချက်က ဒေါ်စမ်းမော်ကြာကြာမနေနိုင်တော့ဘူး။ “အားဟားးဟားးမောင်လေးမမပြီးတော့မယ် ပြီး တော့ မယ် အားးး”
“မမပြီးပေမယ့်မောင်လေးမပြီးသေးဘူး မမ” “အေး ပါ မင်းပြီးအောင်လုပ်” “ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်း” “အားဟားးဟားးရှီး ရှီးရှီးမောင်လေးမမပြီးပြီ ပြီးပြီ အား ရှီးရှီး..အား”. ဒေါ်စမ်းမော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ မင်းသူလီူကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး “မမကုန်းပေးအုံး ” “အင်း ကုန်းပေးမယ်” ဒေါ်စမ်းမော်လူးလဲထကာကုန်းပေးလိုက်တယ်။ မင်းသူလည်း ဒေါ်စမ်းမော်နောက်ကနေပြီး လီးကိုထည့်လိုက်တယ်။ “ပြွတ် ” “အိုး အားရှီးကောင်းတယ်မောင်လေး ” “””ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်း” “အားအိုးးအင်းဟင်းးဟင်း ကောင်းတယ်” နောက်ကနေဒူးကွေးပြီး မီးကုန်ယမ်းကုန် ခါးကိုင်ဆွဲပြီးလိုးပေးလိုက်ရာ ဒေါ်စမ်းမော်လည်း အော်ညည်းရင်း ဒုတိယအကြိမ်ပြီးဆုံးဖိုြ့ဖစ်လာပြန်တယ်။ “””ဗျစ် ဘွတ်ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဘွတ် ဖန်းဖန်း”
“အားဟားးဟားးမောင်လေးမမပြီးတော့မယ်” မင်းသူလည်းပြီးချင်လာပြီမို့စိတ်မထိန်းတော့ပဲ သုတ်ကို အဖုတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်ပြီး ဒေါ်စမ်းမော်ကို ရှေ့သို့တွန်းလှဲကာ လီးကိုအဖုတ်ထဲစိမ်ရင်း ဒေါ်စမ်းမော်အပေါ် မှောက်ချလိုက်တော့တယ်။ အဖုတ်ထဲသွင်းပြီး ဇိမ်ခံနေသောမင်းသူကို “ကိုယ်တော်လေး ဇိမ်ခံမနေနဲ့တော့ မမလေးနေပြီ” “ဟုတ်ကဲ့မမ” မင်းသူလည်းမမဘေးလှဲချလိုက်ပြီး မမကိုဆွဲဓက်ကာ အနမ်းလေးတပွင့်ပေးရင် “မမကောင်းလား” “အရမ်းကောင်းတယ် မောင်လေးရယ်” မောပန်းနေကြတဲ့နှစ်ယောက်သား အဝတ်မဝတ်နိုင်ပဲ ဖက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ ***********
ဦးအောင်မောင်းရွာပြန်သွားတော့ ရွာက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကိုသွားရောက်ပြီး ကန်တော့လိုက်တယ်။ “ဒကာကြီးအောင်မောင်း မင်းလည်း ပျောက်သွားလိုက်တာ အခုမှပဲ ရွာပြန်လာတော့တယ်” “တင်ပါ့ဘုရား” “အေး ဒကာကြီးလည်း အသက်အရွယ်ရလာပြီပဲ၊ တရားရောအားထုတ်ဖြစ်လား” “မထုတ်ဖြစ်ပါဘူးဘုရား” “အေးကွယ်သေရင်ကိုယ့်နောက်ပါမှာ ဒါနနှင့်သီလပဲ မဟုတ်လား” “တင်ပါ့ဘုရား” “အေး ကွယ် တဏှာလောဘနောက်ပဲလိုက်နေရင် ဘယ်လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ပါ့မလဲကွယ်” “တင်ပါ့ဘုရား” “အေးဒီမှာတရားစခန်းဖွင့်ထားတယ် ၊အချိန်ရရင် တရားအားထုတ်သွား” “တင်ပါ့ဘုရား” ဦးအောင်မောင်းစဉ်းစားကြည့်တယ်။ ကျန်းမာရေးကြောင့် စီးပွားရေးတောင် မလုပ်နိုင်တော့ဘူး တဏှာရာဂရော မလုပ်ဖြစ်တာ ကြာလှပြီ။
နောက်ဆံတင်းစရာ သားသမီးကလည်း မရှိဘူး။ မိန်းမအပေါ် မှာလည်း ကျန်းမာရေးကြောင့် လင်မယားလိုမနေဖြစ်ပဲ မောင်နှမလိုပဲနေဖြစ်တယ်။ တဏှာကုန်လို့လား။ မဟုတ်ဘူး ကျန်းမာရေးကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ အခုအသက်လည်း ကြာကြာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ငါအချိန်ရတုန်း တရားအားထုတ်မယ်ဆိုပြီး တရားအားထုတ်ခဲ့တယ်။ တရားအသိလေး ရင်ဝယ်မှတ်ပြီး ရန်ကုန်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ မင်းသူနဲ့ဒေါ်စမ်းမော်ကတော့ တဏှာကြောမှာ မြောနေရာက ဦးအောင်မောင်းရောက်လာလို့ အရှိန်သတ်လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စားနေကြအရာမစားရရင် နေမထိထိုင် မသာဖြစ်တော့ ခိုးပြီးစားရာက ဦးအောင်မောင်း ရိပ်မိသွားတော့တယ်။ တနေ့တော့ မင်းသူမရှိချိန်မှာ “စမ်းမော်”
“ရှင်ကိုကြီး” “အင်းးးငါ နင်နဲ့မင်းသူကိုရိပ်မိတယ်” “ရှင်ကိုကြီး” “အေး ငါသိတယ် ငါကမွေးစားရအောင်ခေါ်တာ နင်က အမှန်အကန်မွေးစားလိုက်တာပေါ့” “ကိုကြီး ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ” “အေးပါ ငါ့မှာတရားရှိပါတယ်။ ငါ့ကိုယ်စား ငါ့တူလုပ်ပေးတယ်လို့ပဲ မှတ်ပါတယ်” “ရှင်ကိုကြီး’” “အေးဟုတ်တယ်လေ ။ဒီကိစ္စကငါက လူတွေဖွင့်ပြောရင် ငါကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုပဲဖြစ်မှာ အိုကြီးအိုမရောက်မှ ငါကတရားစွဲရင် နင်ထောင်ကျမယ်.. နင်ထောင်ကျရင် ငါ့ကိုပြုစုမယ့်သူ မရှိတော့ဘူး”
“ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြီးတရားတော့မစွဲပါနှင့်ရှင်” “အေးတရားလည်းမစွဲဘူး နင်လည်း ငါ့ကို အကိုကြီးတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီးပြုစုပါ” “ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး” “အေးတစ်ခုတော့ပြောမယ် လူသိအောင်တော့ မနေကြနဲ့၊ ဒီနေ့ကစပြီး နင်နဲ့ငါခွဲအိပ်မယ်.. ငါလည်း တရားအားထုတ်မယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး” “တစ်ခုပြောမယ် မင်းသူကငယ်သေးတယ်။ နောက်ကျရင် ပြသနာမတက်စေနှင့် ငါပြောတာလည်း သူမသိပါစေနှင့်” “ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး” ဦးအောင်မောင်းလည်း ထိုနေ့ကစပြီး တရားလေးမှတ်ပြီး အေးချမ်းစွာနေတော့တယ်။ တဏှာရာဂအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ ဒေါ်စမ်းမော်ကတော့ ဦးအောင်မောင်းကိုယ်စားမင်းသူနဲ့ပဲ…. တဏှာတောမှာ ပျော်နေကြတော့တယ်။ ပြီးပါပြီ
ပိုးတွေ့လူနာ ၁၀၀ ဦးဖြင့် စံချိန်တင်၊ စုစုပေါင်း ၁,၄၁၉ ဦးရှိလာ”